Aza hadino fa ny horonantsary Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) dia fandrika vaovao sandoka: Martin Vrijland
loharanom-baovao: feno mifanerasera.nl
Ny Covid-19 Janet Ossebeard (faribolana, Ninefornews) antontan-taratasy momba ny coronavirus (jereo eto ambany) dia voafandrika. Tokony ho fantatrao fa ny SuperM Super Blue supercomputer toy ny fiandohan'ny taona 1996 Tompondaka eran-tany Kasparov miaraka amin'ny chess sy ny Quantum Computer Alphabet an'ny Google tamin'ny taona 2016 tompondaka eran-tany amin'ny lalao be pitsiny indrindra Go naharesy. Ho fanampin'izay, tokony ho fantatrareo fa ny haino aman-jery dia mahavita mamoaka ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny zava-drehetra (anisan'izany ireo teoria-mpiray tsikombakomba).
Azon'izy ireo atao ny manangona ny zava-drehetra ho toy ny sarimihetsika ary mahatonga anao hieritreritra fa tena vaovao tokoa izany, ka ny mpandefa vaovao vaovao toy ny NuCheck.nl dia afaka mandoro azy amin'ny dingana manaraka. Miaraka amin'ny fanangonam-baovao lehibe rehetra ankehitriny, ireo mpitarika izao tontolo izao dia mahafantatra ny fomba filalaovan'ny masobe hatrany amin'ny haavon'ny micro-target.
Ny zavatra manitikitika azy rehetra momba izany dia maro ny fahamarinana satria apetraka ny vaovao sandoka noforonina, saingy noho ny olona taty aoriana dia tonga ny "porofo" fa misy vaovao sandoka, azon'izy ireo manary ny zaza amin'ny rano fandroana azy ireo.
Tiako ny hanasongadinana izany aminao ary hanoro anao ny tena hamaky sy hizara ny bokiko. Tsy misy azo aseho anao ny paikadin'ny fanoherana voafehy. Tsy Ninefornews, Tsy TadiavinaToKnow, Tsy Jensen, Tsy Niburu, fa tsy Infowars. Izany dia satria izy ireo no farany. Aza zaridaina ao! in ity lahatsoratra ity ary ao amin'ny bokiko dia hazavaiko amin'ny antsipiriany io paikady fanoherana mifehy io.
Henoy eto ho ohatra ny fomba fiasa farany: ohatra
Amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny metro.co.uk jereo hoe ahoana izany horonantsary nataon'i Janet Ossebaard io dia ho voatondro ho vaovao sandoka.
Ny fialan-tsiny nataoko, tsy te ho saro-pady aho ary hendry, saingy nandao ny asako efa fito taona lasa izay aho satria manelingelina ahy ny lainga ao amin'ny media. Tamin'izany fotoana, ohatra, dia mbola nino an'i Alex Jones 'Infowars aho ary niafara tamin'ny tontolon'ny haino aman-jery hafa. Ka hitako tao anaty ao fa samy tsy dia faly tamin'ity doka hafahafa ity ao amin'ilay mofomamy (jereo fanazavana).
Ataovy maranitra ary aza mianjera ho an'ny harato fiarovana sy ny mpiady voaheloka mpanohitra voaheloka (jereo ny bokiko raha mila fanazavana fanampiny, na izany aza vooral ity andiany).
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, horonantsary maro no nalefa tamiko hamandrika ahy ary hanosika ahy handefa hafatra toy izany izay azo antsoina hoe vaovao sandoka; raha atao amin'ny fanandramana mainty ny tranoko. Ka tsy maintsy miambina ianao ary mijanona ho manakiana. Ao amin'ny bokiko dia milazàko ny fomba mankany amin'ilay loharano fampahalalana marina (ny anao voalohany) sy ny fomba ahafahantsika mamaha ity rafitra virus ity.
"Ny fomba tsara indrindra mifehy ny mpanohitra dia ny fitarihana azy io", i Vladimir Lenin
Lisitry ny rohy loharano: destentor.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
Ny antony mahatonga an'i Ole Dammegard tombony ho an'ny media hafa
Manara-maso ny fanoherana ve i Martin Vrijland? Tsia: Vakio eto fa tsy izany no izy!
Tags: hafa, rano fandroana, tranokala tsikombakomba, tetik'asa fikomiana, tetikady fikomiana, Fehezo tsara, Coronavirus, Covid-19, fanadihadiana, hosoka, Featured, Janet, tsara fanahy, haino aman-jery, vaovao diso, vaovao, ninefornews, oppositon, Ossebaard, valcabal.nl, fandrika
23 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 25
Ohatra, tena mino ve ianao fa tena fanoherana i Robert Jensen? Manao video tsara izy! Iza amin'ireo studio no heverinao fa hanao fampisehoana? Ny an'ny (General Dutch Press Agency) John de Mol angamba?
Mifohaza marina… haratovo fiarovana: tsipika farany
Nesorina tamin'ny tantara ratsy izy ireo tamin'ny farany mba hialana amin'ny harato feno - miaraka amin'ny mpanaraka sy ny rehetra - ao anaty lafaoro.
Ny fanovana REAL dia tsy avy amin'ny lehilahy sy vehivavy aorian'ny fakantsary! Izany dia mitazona anao amin'ny fisainana fa handamina izany ho anao izy. Ny fanovana REAL dia manomboka amin'ny fampiavana ny tenanao!
23 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 45
Ahoana ny fomba hiresahanao ny olona toy ny mijery ny Teletubbies? Làlana sesame!… Pffff ajanony ny fampifangaroana ny fahamarinana amin'ny tsy misy dikany! "The Cabal," "Trump the Mpamonjy," "Q" ("tsara ho anao"), ary bebe kokoa amin'ireo karazana teolojika momba ny fiarovana.
Mampirehitra mangingina ny hevitra momba ny kaomionista i Madama!
Trump dia tsy mpamonjy! Ary ny teti-bola ara-bola nomen'ity Madama 'faribolana' ity dia nomanina tsara ary nampidirina tamin'ny alàlan'ny hiseho ankehitriny eo imasonareo, miaraka amin'i Trump eo amin'ny fonosana. Ny sarintanin'ny lalana mankany amin'ny kaominisista teknolojia (totalitaly) "Ny famonjena ny fanjakana" .. natsangan'i Jannet Ossebaard 'faribolana. Midika ara-teknolojika: fehezin'ny teknolojia..AI so..big data: modely sinoa ny kaominisma teknolojia! Fiarahamonina goavambe kominista iray! Izany no anentanan'ity ramatoa ity!
24 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 20
Hey John de Mol: Diewertje Blok dia mety ho safidy tsara kokoa amin'ity paikady fiarovana fiarovana ity….
24 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 35
Fanamarihana (9:30 min.): "Raha misy fanakatonana feno ny haino aman-jery sosialy, aza matahotra satria ny Operation Defender 2020 dia napetraka hisambotra ny governemanta mpanao kolikoly."
Tsy misy 'faribolana' ... hampiasana ny olona tsy hifampiresaka intsony, ka tsy mikomy amin'ny fanagadrana azy farany.
Hagaigena izao! Shill!
24 Martsa 2020 ao amin'ny 01: 15
Shill Micha Kat dia nanamafy ny tantara momba ny fiarovana fiarovana Q Anon mitovy
24 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 49
Hadalana tanteraka. Ary efa namaky ireo fanehoan-kevitra etsy ambany, izy ireo koa dia mandaka amin'ny zoro, tsipika ary sinker. Mazava ho azy fa tena te hino hafatra mahasoa izy ireo.
Rahalahy lehibe no hamonjy antsika amin'ny elite ratsy, Tia ny zokinao, matoky ny zokinao, matoky an'i Trump, matoky ny tafika. Hitondra ny filaminana sy firindrana ao amin'ny tontolo vaovao
Hifoha amin'ny fomba mahatsiravina izy ireo rehefa tara.
Any Etazonia koa, ianao dia manana io olona adala toa azy io izay mitory ity karazana hafatra ity. Hamonjy antsika ny sasquatch, ny olom-pirenena no hamonjy antsika, ny famonjena no hamonjy antsika, ny famonjena kosa no hamonjy antsika.
24 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 29
Marobe ny fihetseham-po lyrika eo ambanin'ity horonantsary ity (covid19 ampahany 3). Jereo ny kaonty vitsivitsy ao ambadik'ireo fanehoan-kevitra. Ny ankamaroany dia manana horonantsary youtube mitovy sy mpankafy 1 na 2. Ny kaonty YouTube hafahafa dia toa kaonty sandoka na noforonin'olona vitsivitsy mitovy
24 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 33
Feno kaonty sandoka, kaonty hosoka lalina sy bots AI izay mamaly ny media sosialy. Tsy afaka mandray tsara ny valin'ny haino aman-jery sosialy lehibe ianao ary tsy miraharaha azy ireo akory.
24 Martsa 2020 ao amin'ny 16: 43
Famaliana faty ny ankizy!
« Ny karatry ny taratasim-bolan'ny Bill Gates dia ny karapanondro ID tsy misy tariby izay manara-maso raha manana coronavirus ianao ary na nahavita vaksiny.
Coronavirus covid-19 fanavaozana mihidy: rehefa mifoha ianao ka mahatsapa fa voafandrika, inona no azonao atao? »